Kanaan dura barreeffamoonni sarbamuu mirga dhala namaa biyya Itoophiyaa irratti xiyyeefatan marsariitii ‘Untold Stories’ irratti maxxanfamaa turaniiru. Gaafan jalqaba, odeeffanoo namoota mirgi isaanii sarbamanii dhagahu, dararaan yakka hojjatteetta jedhanii amansiisuun qaama tokko akka ta’e hubadheera. Abdullahiin (saaxilaa yakka mootummaa), dararaa hamaa mana hidhaa Ogaadeen keessatti raawwatu ragaan deeggaree maxxanseera. Hiriyoonni Joomaneeksi, miseensonni garee Biloogii Zoonii 9, waan waa’ee mirga dhala namaa barreessaniif qofa dararaan kana hinjedhamne irra gahaa ture. Akkasuma, Caalaa, walaleessaa/waloo, walaloo wa’ee ummata Oromoo irrati xiyyeeffatu waan barreessef dararaan guddaan irra gaheera. Kana malees, Zalaalam, Yonaataan fi Baahiruun, nageenya dijitaalaa irratti leenjii fudhattaniittu jedhamanii mana hidhaattidararamaa turaniiru. Bakka yaada ofii bilisaan ibsachuun hinjirretti, mootummoonni abbaa irree dararaa fayyadamuun namoota afaan qabu.